🥇 ▷ Qualcomm: Snapdragon 875 waa in lagu soo saaraa nidaamka 5 nm, waxaa loo isticmaali karaa OnePlus 9 ✅
Qualcomm: Snapdragon 875 waa in lagu soo saaraa nidaamka 5 nm, waxaa loo isticmaali karaa OnePlus 9
Si kastaba ha noqotee, ku dhawaaqista chipset-ka xiga ee ka soo baxayo kooxda ‘Qualcomm’ ayaa soo socota. Tani waxay u badan tahay inay noqon doonto Snapdragon 865, oo lagu soo saaray geeddi-socodka 7nm. Laakiin sidoo kale waxaa jira xanta 2021, sidaa darteed Snapdragon 875 waa SoC-ga ugu horreeya ee laga soo saaray Qualcomm ee la soo saaray iyada oo la adeegsanayo 5 nm.
Gogosha dhamaadka dhamaadka 2020 waxay u badan tahay inay ku taal Dhig Qualcomm Snapdragon 865. Kaliya Samsung, Huawei iyo Apple ayaa iyaguna soosaaraya oo dhista chipset aad adigu iska leedahay. Isla mar ahaantaana, Qualcomm ma soo saareyso sameeyeyaasheeda lafteeda, laakiin waxay mas’uul ka tahay naqshadeynta farsamada ee chipsets-ka. Loogu talagalay Snapdragon 845 iyo Snapdragon 855, Qualcomm waxay iskaashi la sameysay Shirkadda Soo Saarka Shirkadda Semiconductor Taiwan Semiconductor (TSMC). Marka loo eego Snapdragon 865, si kastaba ha ahaatee, Samsung ayaa mar kale la wareegi doonta wax soo saarka. Tani waa inay ku dhisnaato geeddi-socodka 7 nm.
Transistors-yada badan halkii mm²
Qaababka cusub waxay kordhiyaan qadarka transistors-yada ku jiri kara guntinka. Tiro badan oo iyaga ka mid ah waxay bixiyaan waxbadan oo ka mid ah waxqabadka sare iyo waxtarka badan. Gaar ahaan adeegsiga awooda chipset wuxuu door weyn ka ciyaari doonaa mustaqbalka, maxaa yeelay tijaabooyinka bilowga ah waxay muujinayaan taas 5G batteriga sida saxda ah u cunay tamar. Awoodda ayaa lagu badbaadin karaa iyadoo la adeegsanayo qalabyo wax ku ool ah.
5G-modem Qualcomm Snapdragon X55 ayaa wali loo rakibay si gooni gooni ah | (c) Qualcomm
Qalabka loo yaqaan ‘Snapdragon 865’ wuxuu ku imaan doonaa laba qeybood oo suuqa ka mid ah, midkoodna leh modem 5G oo isku dhafan. Tani waxay ku kaydineysaa wax soo saareyaasha boorsada Motherboard-ka, tani waa mid qaali ku ah taleefannada casriga ah si kastaba ha noqotee. Huawei wuxuu la mid yahay qorshihiisa isla Kirin 990 SoC, kaas oo la soo bandhigi doono bisha Sebtember 6. Chipset-kaan waxaa lagu rakibi doonaa Mate 30, Mate 30 Pro iyo Mateable X oo wuxuu isku dari doonaa modem 5G ah. Huawei wali waxay isticmaashaa Balong 5000 chip oo loogu talagalay Mate 20 X 5G.
2021, sida laga soo xigtay Sina.com, Snapdragon 875 ayaa la qorsheeyay. Tani waxay u muuqan doontaa si gaar ah sidii 5G nooc waxaana soo saari doona TSMC. Waxaa la soo saaray iyadoo la adeegsanayo geeddi-socodka 5nm, cutubkan chip-ka ah wuxuu lahaan karaa 171.3 milyan oo transistor-kiiloo mitir oo laba jibaaran. Qaddarkan aadka u weyn ee aadka u weyn ayaa markale kordhin doona waxqabadka oo kordhin doona waxtarka. Samsung waxay dooneysaa inay awoodo inay hoos u dhigto wax soo saarkooda 3 nm xitaa marka la gaaro 2022, sidaa darteed waxqabadka taleefanka casriga ee mustaqbalku wali waa uu socdaa.
Inbadan oo kusaabsan: Qualcomm, Snapdragon, Snapdragon 835, Snapdragon 845, Snapdragon 855